हाम्रो देशले हिमाल देखाएरै कमायो ५० करोड !, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
हाम्रो देशले हिमाल देखाएरै कमायो ५० करोड !
भूमिराज 'पिठातोली' , ३१ अषाढ २०७६
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको बसन्तकालीन समयमा हिमाल आरोहणमा मात्रै करिब ५० करोड रकम रोयल्टीबाट संकलन भएको छ।
नेपाल सरकारले देशभरीका ४ सय १४ हिमालको आरोहण खुला गरेपनि हालसम्म ५९ हिमालमा मात्रै पर्यटकले आरोहण गरेका छन्। त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी हिमाल आरोहीको नजरमा पर्ने भनेकै विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हो।
सगरमाथामा आरोहण गर्नका लागि त्यो भन्दा साना कम्तीमा ६ हजार मिटर उचाई भएका हिमालहरुको आरोहण गरेको हुनेपर्ने प्राबधान छ। तैपनि सगरमाथा आरोहण गर्नेको संख्या पनि घटेको छैन। यस वर्षको वसन्तकालीन समयमा मात्रै सगरमाथा आरोहण गर्नेकोे संख्या ६ सय ५९ जना पुगेको छ।
३ सय ८१ जना आरोहीसहित गाइड, शेर्पालगायतको ६ सय ५९ जनाले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेको पर्यटन विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार यो वर्षमा सगरमाथापछिको दोश्रो ठूलो संख्यामा ल्होत्से आरोहण गरिएको छ। ल्होत्सेमा १२ आरोहण दलका ९८ जनाले सफल आरोहण गरेका छन्।
त्यस्तै ८ हजार ४ सय ६३ मिटर उचाई रहेको मकालुमा पनि यो वर्ष ४ आरोहण दलका ५३ जना आरोहीले आरोहण गरेका छन्। आरोही तथा एजेन्सीहरुले यो वर्ष हिमाल आरोहणका लागि ३२ हिमालको अनुमति लिएपनि ३० वटा हिमालको मात्रै आरोहण गरेको पर्यटन विभागका प्रवक्ता सुरेन्द्र थापाले बताएका छन्।
यो बसन्तकालिन मौसममा सबैभन्दा बढी रोयल्टी संकलन गर्ने हिमाल पनि सगरमाथा नै देखिएको छ। सगरमाथा आरोही ३ सय ८१ जनाले मात्रै ४४ करोड २४ लाख ३७ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँ ५० पैसा जम्मा गरेका थिए। ४४ आरोहण दल मध्ये ७ नेपाली आरोहण दल र ३७ विदेशी आरोहण दलका ३ सय ८१ आरोही सहित गाइड, शेर्पा गरेर ६ सय ५९ जनाले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका थिए।
त्यस्तै यो वर्षमा दोश्रो नंमा रोयल्टी (राजश्व) बढी संकलन गर्ने हिमाल हो ल्होत्से । ८ हजार ५ सय १६ मिटर उचाईमा रहेको ल्होत्से हिमालले १ लाख ७४ हजार ९ सय डलर ( नेरु. १ करोड ९३ लाख ५९ हजार ८ सय ५५) जम्मा गरेको छ। त्यस्तै मकालुले पनि ९५ हजार ४ सय डलर (१ करोड ५ लाख ३८ हजार ७ सय ३० नेरु) संकलन गरेको छ।
त्यस्तै चौथौ नम्बरमा रहेको अमादब्लम हिमालमा पनि यो बसन्तकालीन सिजनमा ५ आरोहण दलका ४९ जना आरोहीहरुले सफल आरोहण गरेका छन्। जसबाट १९ हजार ६०० डलर (नेरु २१ लाख ६३ हजार ३ सय) रोयल्टी संकलन भएको छ।
पर्यटन विभागमा आरोहीहरु तथा एजेन्सीहरुले अनुमति लिएका १ सय १३ आरोहण दलका ८ सय ६८ जना आरोहीहरुले यो सिजनमा ३० वटा हिमालको सफल आरोहण गरेका छन्। गाइडसहित शेर्पा, कामदारहरुले पनि बिभिन्न हिमाल आरोहण गरेको जनाइएको छ।
नेपाल पर्यटन विभागका अनुसार यो सिजनमा मात्रै ४४ लाख ८१ हजार ९० डलर (नेरु ४९ करोड ५९ लाख ८६ हजार ६ सय २२ रुपैँया ५० पैंसा) संकलन भएको जनाएको छ।
आरोहणकै क्रममा १६ जनाको मृत्यु पनि भएको छ। जसमा ८ जनाको सगरमाथा आरोहणकै क्रममा मत्यु भएको र १ जना हराइरहेको विभिन्न एजेन्सीहरु उदृत गर्दै पर्यटन विभागले जनाएको छ।